Waa maxay cudurka coronavirus disease 2019 (COVID19) | Somali Health
Home Warar Waa maxay cudurka coronavirus disease 2019 (COVID19)
Waa maxay cudurka coronavirus disease 2019 (COVID19)
Feyrus cusub oo loo yaqaan “ novel coronavirus, nCov)“ ahna nooc cusub oo ka tirsan qoyska coronavirus ayaa ka dilaacay dalka Shiinaha. Hey’adda Caafimaadka Adduunka ku talisay in la dhan karo 2019-nCoV
2019-nCoV horay looguma aqoon in uu ka dhaco bini-aadamka, balse la xaqiijiyay in u kala gudbo. Feyruskaan ayaa horraantii bishii Disember 2019 ka dillaacay oo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan, gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, inkastoo inta badan dadka uu ku dhacay ka shaqeyn jireen ama booqdeen suuqa lagu iibiyo cunnada badda ee magaallada Wuhan ee Shiinaha.
Fayrasyada coronaviruses waa qoys ballaaran (family) oo ka kooban afar duul (genera) oo kala ah: Alpha-coronavirus, Beta-coronavirus, Gamma-coronavirus iyo Delta-coronavirus. Waa fayrasyada leh acid bu’eedka RNA (RNA virus) waxaa markii ugu horreysay la aqoonsadey 1960-yadii, laakiin ilaa hadda lama garanaayo halka ay ka yimaadeen asal ahaan. Magacooda corona waxa loogu bixiyey qaab muuqaaleedka dhiskooda oo u eg goobo iftiin ah oo qorraxda ku wareegsan ama qaab muuqaaleedkoodu wuxu shabbahaa oo u eg yahay taajka (crown).
Cudurrada uu coronaviruses sababay waxaa ka mid ah; Cudurka neef- Severe Acute Respiratory Syndrome SARS (SARS-CoV) oo ka dillaacay Shiinaha Nov 2002 – Jul 2003 iyo cudurka mareenka Bariga Dhexe – MERS (MERS-CoV) oo ka dillaacay Saudi Arabia 2012 ilaa iyo haddana weli dadka ku dhaca.
Cudurka coronavirus disease 2019 (COVID19)
Hey’adda caafimaadka adduunka waxay ku dhawaaqday magac cusub oo loo bixiyiyay cudurka laguna magacaabay “Coronavirus disease “COVID-19”
Cudurka COVID-19, waa mid ka mid ah cudurada la is qaadsiiyo ama faafa. cudurkaan lama aqoon ka hor inta uusan ka dillaacin magaallada Wuhan, gobolka Hubei ee dalka Shiinaha, bishii Diseembar 2019. Ilaa imminka waa loo dhimanayaa, la is qaadsiinayaa oo waa sii fidiyaa wuxuuna gaaray dalal badan. Cudurkaan waxaa sababa fayras cusub oo ugub ah oo loo yaqaano “new novel coronavirus, nCov”
Cudurka wuxuu u muuqdaa inuu awood u leeyahay inuu sababi karo cudur daran iyo dhimasho. macluumaadka hordhaca ahi waxay muujinayaan inuu ku dhaco cudurkani ama inta badan oo ay nugul yihiin: dadka da’ada ah, dadka qaba xaaladoaha kale ee caafimaad-darro ah iyo weliba dadka difaacood hooseeya.
Sidee ayuu ku fidaa
Dadku waxay ka qaadi karaan cudurka COVID-19 dadka kale ee la xannuunsan cudurka. Tusaale; Qofka qaba cudurka COVID-19 markuu qufaco ama hindhiso waxuu sii deynaa dhibco qoyaan yaryar kuwaas oo gaara hareerahiisa. Dadka kale waxay ka qaadayaan marka ey ka galaan Afka, Sanka iyo Indhaha si toos ah ama dadban (taabashada). Sidoo kale, cudurka waxa laga qaadi karaa haddii aad neef ka qaadatid si toos hawo uu ku qufacay ama hindhisay qof qaba cudurka kaasoo kuu jira wax ka yar masaafo ah dhan 1 mittir.
Calaamada cudurka Coronaviruses
In kastoo ay kooban yihiin macluumaadka badan oo laga haayo cudurka, haddana waxa la aamminsan yahay calaamada cudurka badankood waxay la mid yihiin cudurrada kale ee ku dhaca habdhiska neef-mareenka qeybtiisa sare.
Calaamadaha ugu caansan ee cudurka COVID-19 waa qandho, qufac, neefsashada adkaato iyo urta iyo dhadhanka dhuma. Bukaannada qaar waxay yeelan karaan xanuun jirka ah, daal badan, sanka oo caburmo, sanka ka yimaado biyo, cuno xanuun iyo shuban..Calaamadahaasi badanaa waa kuwo sahlan oo si tartiib tartiib ah ayey u bilaabmaan.
Cudurka COVID-19 weli looma hayo wax daawo ah ama tallaal oo lagaga hortagi karo. Bukaannada badankood way kasoo kabsadaan cudurka iyaga oo u baahnayn daaweyn gaar ah, waayo waa cudur guud ahaan sahlan oo aan u baahnayn daaweyn gaara. Haddii loo baahdo waxa ku filan qofka xannuunsan inuu isticmaalo waxyaabaha xumadda iyo madax xanuunka ka jebiya iyo dabcan nasasho iyo inuu qofku qaato cabitaan badan.
Haddiise qofku aad u xanuunsado waxaa wanaagsan markiiba inuu la xiriiro xarumaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta si loo hubiyo xaaladdiisa caafimaad dadka kalena looga ilaaliyo inuu qaadsiiyo.
Bukaannada xaaladdooda caafimaad daran tahay ee u baahda in la dhigo isbitaallada, waxa keliya ee lagu daaweeyaa waa gargaarid (supportive therapy) iyo ku daaweynta oxygeenta si looga ilaaliyo bukaanka inaan naqasku ku dhegin ama xubnaha kale ee muhiimka ah dhaawac gaadhin (vital organs).
Si kastaba ha noqotee, dadka leh qandho, qufac iyo neefsashada ku adag waa inay raadiyaan ama helaan daryeel caafimaad.
Siyaabaha looga hortago COVID-19
Ka hortagga iyo xakamaynta cudurka mudnaanta ugu sarreysa waxa koow ka ah tallaabooyinka shakhsigu ama qofku isku ilaalin karo iyo in la raaco talooyinka ay bixiyaan hawlwadeennada caafimaadku.
Si joogta ah ku dhaqa gacamahaaga saabuun iyo biyo muddo 20 ilbiriqsi ah.
ku dabool afkaaga iyo sankaaga maro ama xusulkaaga marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid, isla markiiba ku rid qashinka.
Ka taxaddar taabashada afka, indhaha sanka iyo guud ahaan wajiga.
Iskuday inaad ka fogaato xiriir dhow lala yeelato dadka qaba cudurka
Haddii aad u saferysid wadamada cuudrka laga soo sheegay, Dib u dhigo haddii ay suuragal kuu tahay.
Previous articleCudurka Jadeecada (Measles)
Next articleSaameynta ay Shiishaddu (HOOKAH) ku leedahay caafimaadka Aadanaha
Waraka ugu dambeeyay cudurka cusub ‘Novel Coronavirus’ | Somali Health January 25, 2020 at 9:25 pm
[…] waxaa sii xowli ah ugu faafaya Feyrus cusub oo loo yaqaan “novel coronavirus”. Illaa iyo hadda, In ka badan 1400 qof ayuu ku dhacay feyruska, halka 41 bukaan ey u dhinteen, […]